Nagu saabsan - Nortech Engineering Corporation Limited
Shirkadda 'NORTECH Engineering Corporation' oo Xaddidan waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya soo saarayaasha waxsoosaarka warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, oo in ka badan 20 sano khibrad u leh adeegyada OEM iyo ODM.
oo leh kooxda iibka ee Shanghai, iyo xarumaha wax soo saarka ee Tianjin iyo Wenzhou, Shiinaha, waxaan siinnaa xalal kala duwan macaamiisheenna adduunka.
Saldhigga waxsoosaarka wuxuu gaarayaa 16,000㎡ 200 shaqaale ah 30 kamid ahna waa injineero sare iyo farsamo yaqaanno.
Tianjin Greatwall Flow Valve Co., ltd,soo saaraha ugu sareeya ee soo saaraha waalka ee Shiinaha, xarunta wax soo saarka ee balanbaalisyada balanbaalka, jeegaga wax lagu baaro iyo shaandheeyeyaasha, kaas oo u shaqeeyay sidii soo saaraha OEM ee shirkadaha waalka adduunka hogaamiya.
Ku qalabeysan yahay in ka badan 100 nooc oo ah soo saarida birta & goynta, makiinadaha iyo qalabka baaritaanka oo ay ku jiraan mashiinada CNC, NDT kiimikada cilmiga sare leh, falanqaynta muuqaalka muuqaalka, baaritaanka hantida farsamada, qalabka cilad sameynta ultrasonic, gags dhumucda ultrasonic, sidoo kale qaadista, qalabka gaadiidka
Lagu sharciyeeyay ISO9001, waxaan si adag u raacnaa nidaamka caadiga ah ee ilaalinta tayada.
CE / PED loo sharciyeeyay midowga Yurub.
WRAS iyo ACS ayaa loo sharciyeeyay biyo la cabbo, taas oo ku qasban suuqa UK iyo Faransiiska.
Shanghai ES-Flow warshadaha Co., ltd,oo leh bakhaarro, kooxda iibinta iyo taageero farsamo, waxay leeyihiin kala duwanaansho ganacsi oo loogu talagalay keydinta, dhaqaajinta iyo qaybinta filtarka, iyo sidoo kale xalka xakamaynta socodka macaamiisheena.
Iyada oo leh qaybo badan oo ka mid ah qaybaha waalka iyo qalab dhammaystiran sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaan dammaanad qaadno waqti dhalmo gaaban.
Tayada lagu kalsoonaan karo iyo keenista degdegga ah ayaa naga dhigeysa inaan ka soo baxno boqolaal ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha.
Waxyaabaha ugu Muhiimsan: Qasabadaha firfircoon, waalka balanbaalis-pneumatic, waalka balanbaalis koronto, waalka kubada pneumatic, filtarka kubada korontada, waalka iridda, jeegga jeegga, waalka adduunka, strainers ect.
Kala saar walxaha, xirashada iyo xirxirida
Valve actuation, dayactirka iyo dib u cusbooneysiinta
NORTECH qasabadaha ayaa loo dhoofiyay Ameerika, Yurub, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya, kuwaas oo macaamiisheenna ku qanciya tayo sare iyo adeeg wanaagsan.
Waxaan aaminsanahay in tayo sare, qiimo tartan iyo adeeg tixgelin leh ay yihiin taageerada adag ee adiga laguu fidinayo.
dhamaan kabka waxaa laga keenayaa aasaasayaasha ugu sareeya ee haysta shahaadada ISO9001.
sax qaybo waalan mishiinka lagu hubiyo in la hubiyo iskeelka ugu yar ee hawlgalka iyo cimriga dheer ee shaqada.
waxaan sidoo kale la shaqeyneynaa soo saaraha kale ee ugu sareeya ee soo saaraha Shiinaha, oo leh dhammaan shahaadooyinka, oo ay ku jiraan ISO9001, CE, ATEX, Firesafe.